आमाबाबुका लागि बालबालिका र उनीहरूका जवाफहरूबाट सामान्य प्रश्नहरू
हाम्रा छोराछोरीहरूको सरल प्रश्न र हामी जवाफ थाहा छैनौं
जिब्राहरू किन ध्रुवहरू छन्?
आमा, कसरी कुकुर बिना कुखुरा सुत्नुहुन्छ?
छोराछोरीबाट अन्य सामान्य प्रश्नहरू
किन आमा पिताजी किन? के तपाइँ बच्चाहरु को रोजमर्रा की जिंदगी को चीजहरुमा यिनी मान्य सरल प्रश्नहरु को जान्दछन्, को एक को साथ मा तर यसको जवाब छैन?
बालबालिका र उनीहरूको जवाफहरूबाट सामान्य प्रश्नहरू
यहाँका बच्चाहरु भन्दा प्राय: साधारण प्रश्नहरूको छोटो र सजिलो जवाफहरू यहाँ छन्!
"आमा, किन जर्बस स्ट्रिपहरू छन्?" मेरी छोरीले चिडियाघरको अन्तिम भ्रमण पछि सोध्छन्।
जेसियस रोम किन भयो?
"ठीक छ," म चारैतिर धकेल्छु, "ताकि तिनीहरू एकअर्कालाई अझ राम्रो मान्दछन्। कुनै दुई जर्ब समान छैन। "यो सत्य हो, मैले कम्तीमा एक पटक पढेको छु।
म अझै पनि थोडा थप राम्ररी बाहिर फेला पार्न र किन zebras धर्काहरू छ प्रश्न दशकसम्म बहस गरिएका पत्ता। त्यसैले म एक्लै मेरो अज्ञानतामा होइन।
द स्ट्रिप्स शरीर तापमान विनियमित मदत वा तातो हावा र सुखा क्षेत्रहरु मा consequent गर्मी तुवाँलो विशेष राम्रो छलावरण लगान छन् थियो: किन zebras धर्काहरू छ मुख्य सिद्धान्त निम्न तरिका आपसमा पशुहरू चिनन बाहेक, छ। यसबाहेक, जब जनावर एक भेडामा एकसाथ उभिएका हुन्छन्, किनभने व्यक्तिगत जनावरहरू पूर्ण रूपमा ब्लर हुन्छ।
समाधान सम्भवतः, 100 प्रतिशत पुष्टि भएन, अझ सजिलो छ। किन जेसियस स्ट्रिपहरू छन् किनभने तिनीहरू टास्स फ्लाइट आक्रमणबाट अझ सुरक्षित छन्। उनीहरूले खतरनाक रोगहरू प्रसारण गर्न सक्छन्। टिस्स फ्लाईको कम्पाउन्ड आँखाले यसलाई जगेको हेर्न असम्भव बनाउँछ।
किन zebras धर्काहरू पशुहरू विशेष धेरै उडान संग क्षेत्रहरु मा स्थित हो किनभने, प्रकृति को त कुनै Freak, तर शायद एक भन्दा बढी विकसित शताब्दीयौंदेखि आत्म-रक्षा छ। प्रश्न अहिले यो अन्य कीराहरू लागू हुन कि र गर्न सक्छन् हामी बस एक पटक pesky लामखुट्टे विरुद्ध गर्मी हामीलाई कालो-सेतो-स्ट्रिप ब्रश गर्नुपर्छ कि छ।
"मामा, हलिउड बिना हेलिकप्टर कसरी सुत्नुहुन्छ? उनीहरूले सास लिनु पर्छ! "
व्हाल्स र डल्फिन कसरी सुत्नुहुन्छ?
राम्रो प्रश्न। दुर्भाग्यवश, मलाई थाहा छैन र सल्लाहको लागि Google लाई मनपर्छ। व्हालय स्तनपान छन्। निस्सन्देह, तिनीहरू कुनै गल्ती छैन र यसैले सधैं उनीहरूको सास पकड्न पर्छ। र यो साँघुरो हामी मानिसहरूको साथ बेहोर्नु हुँदैन।
केही व्हेल प्रजातिले उनीहरूको सास नब्बे सम्मसम्मको लागी राख्न सक्छन्, अरुले केवल चालीस मिनेटको व्यवस्थापन गर्दछ। कसरी व्हालय बिना दमन बिना सोन्छ, निस्सन्देह, एक सुन्दर रोचक प्रश्न।
Google ले मलाई सिकाउँछ कि तपाईंले व्हाल्सको सानो छोरो, डल्फिनबाट निद्रा प्रहार देख्नुभयो। यी अन्वेषणबाट कसरी व्हाइट सुत्न सकिन्छ सोच्न सकिन्छ, तर यो एकदम स्पष्ट छैन।
Dolphins र orcas सधैं आफ्नो दिमाग को आधे संग सोन्छ। अर्को जागिर रहन्छ र उनको निद्रामा जनावरहरूले समयमा उनीहरूको सास पक्र्याउँछ। एक आधे दिमाग निद्रा बोल्छ। एकदम दिलचस्प छ, एक आँखा खुल्ला छ, जो सक्रिय मस्तिष्क को आधा विपरीत छ। त्यसैले डल्फिनहरू केवल शत्रुहरूबाट सुरक्षित छन्।
माथि उल्लेखित व्हालय कसरी सुत्न सकिन्छ, धेरै स्पष्ट छैन। शुक्राणु व्हालयहरू नब्बे मिनेट भन्दा बढी कहिल्यै सुत्न जान्दछन्। तर मस्तिष्क जस्तै गहिरो र दृढताले दिमागी दुवै मस्तिष्कमा। तर चाहे सबै व्हाल्स बिना दमन बिना यस तरिका मा सुत्न, एक थाहा छैन। केही शोधकर्ताहरूले संदेह गर्छन् कि ह्वेलहरू पनि आंशिक रूपमा आधा-मस्तिष्क निद्रामा आउँछन्। दुर्भाग्यवश, म यस प्रश्न को जवाब मा मेरी छोरी को सौ प्रतिशत मा नहीं गरेर सकता, तर हामीले केहि पनि केहि सीखा छ!
किन चम्किरहेको कारण बोस बम्पहरू
हिमपात कहाँबाट आयो?
कसरी स्ट्रिप्स टूथपेस्टमा जान्छ?
के पढ्ने बेला खराब बत्तीले तपाईंको आँखा बिर्साउँछ?
तपाईं गोरखा र बिजुली कसरी पाउनुभयो?
हामीले किन एडभेन्टिभ फागुन छ?
हामी किन मसालेदार खानाबाट हिँड्छौं?
हामी किन ईर्ष्या संग पहेंलो बदल्छ?
किन चिनियाँ व्यक्तिहरूले केकोस्टाहरूसँग खाना खाए?
अहिले यो तेरह किन छ?
के तपाईं पुरानो हुँदा समय छिटो छिटो हुन्छ?
हामी कुकीज खाएर हामी तिर्खा किनौं?
पवन टर्बाइनहरू किन तीन ब्लेड छन्?
रातमा किन अँध्यारो छ?
त्यहाँ कति ताराहरू छन्?
वेंटिलेक्सी कसरी बोल्छ?
कसले पैसा आविष्कार गर्यो?
तपाइँसँग बच्चाहरु बाट कुनै थप प्रश्नहरू छन्। हामी यी प्रश्नहरू हाम्रो अवलोकनमा समावेश गर्न खुसी हुनुहुन्छ! Kontaktieren Sie करें.
ब्याक समस्याहरू - सरल अभ्यास
इटालियन व्यंजन सरल व्यञ्जनहरु
हामी हाम्रा छोराछोरीबाट सिक्न सक्छौं
बतख कसरी पान्छन्?
गुलाबी कसरी रंग्नुहुन्छ?